true public-relations /zu-ZA/tools-for-life/public-relations/steps/what-is-public-relations.html read 1 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/public-relations_zu_ZA.jpg Izisekelo zobuHlobo noMphakathi
Uyemukelwa kwi-Online Course yeziSekelo zobuHlobo noMphakathi
Ubuhlobo nomphakathi bukunika indlela yokuxhumana kahle nabanye ukuze imibono yakho yamukeleke. Kuyikhono elidingekayo lapho uzama ukuthola ukusekelwa kwamaphrojekti akho nezinto ofuna ukuzifeza.
Lapho uzwa amagama athi “ukuxhumana nomphakathi” ungacabanga ngamaphephandaba, imibiko ye-TV noma yomsakazo ngomuntu noma okuthile, njengomlingisi wesilisa noma owesifazane okhuthaza ukuxhaswa kwama-movie abo azayo. Noma uke wabona abantu nezinhlangano bezama ukusebenzisa ubudlelwano nomphakathi ngenjongo engafanele, njengosopolitiki owenza izithembiso ezingekho ukuze nje athole amavoti. Noma ibhizinisi elikhulu elizama ukulawula noma ukuguqula lokho abantu abakucabangayo ngemisebenzi yalo yokungathembeki.
Eqinisweni, ubuhlobo nomphakathi yinto ongayisebenzisa ukuthola ukusekelwa abanye abantu ngamaphrojekthi akho, inkampani noma imisebenzi.
Abantu ababhale futhi bakhuluma ngobuhlobo nomphakathi esikhathini esedlule abaqondanga izinto ezithile eziyisisekelo ngale ndaba. Uma-nje, kwi-Scientology, kutholakale okubalulekile okwenza ukuba sikwazi ukuthuthukisa wonke lomsebenzi nokuthi usebenze ngempumelelo.
Umsebenzi ka-L. Ron Hubbard emkhakheni wobuhlobo nomphakathi wenza ubuhlobo nomphakathi bube yinto noma yiliphi iqembu nanoma yimuphi umuntu angayisebenzisa kalula. Yize izindlela ezahlukahlukene nezinqubo ezakha lendaba zibanzi, imibono eyisisekelo nezindlela ezibekwe lapha zizoba usizo olukhulu kuwe ekufezeni imigomo yakho noma imigomo yenkampani yakho, iphrojekthi noma umsebenzi.
Uma usebenza nabanye ukuthola isivumelwano noma ukubambisana (ukuzimisela ukusebenza ndawonye), noma ukuthi bakusekele kokuthile, usebenzisa (izindlela zokwenza okuthile) nobuhlobo nomphakathi, noma ngabe uyazi ngalokhu noma cha.
Isinyathelo sokuqala sokusebenzisa ngempumelelo ubuhlobo nomphakathi, noma i-PR ngamafuphi, ukwazi incazelo ephelele ye-PR. Uma-nje uma siyichaza kahle, yile: IMISEBENZI EMIHLE UMPHAKATHI OTSHENWE KAHLE NGAYO.
Nge misebenzi emihle kushiwo imisebenzi noma imisebenzi oyenzayo ukusiza abanye.
Ukwenza imisebenzi emihle akwanele uma ufuna ukukhulisa umsebenzi wakho. Kufanele empeleni utshene umpahakathi ukuze uthole ukusebenzisana nawo noma isivumelwano. Ukutshena umphakathi kusho ukwenza into ukuthi yaziwe ngabantu, imvamisa ngokukhangisa nangezinye izindlela zokwenza umlayezo ukuthi usabalale endaweni yakho yonke.
Ngokwesibonelo, ake sithi unqume ukwenza iphrojekthi ukuhlanza indawo owakhe kuyo bese uqala uyokudweba i-graffiti ezakhiweni zomphakathi. Uma ungakaze utshele muntu ngephrojekthi yakho, abantu bakubone wenza lomsebenzi bangacabanga ukuthi uyalelwe yinkantolo yezomthetho ukuthi wenze lokhu ngokuthola amathikithi omgwaqo amaningi noma okuthile. Kodwa-ke, uma ngabe ubuzocindezela ama-handouts akhuthaza Iphrojekthi Yokuhlanza Indawo Ekuhlaleni futhi wayedlulisela kubantu ubacela ukuthibabambe iqhaza, abantu bazokwazi ukuthi wenzani, futhi ezimweni eziningi, bangahle bathathe isinqumo sokubamba iqhaza. Kunezindlela eziningi zokwenza iphrojekthi yakho ukuthi yaziwe kabanzi futhi uthole isivumelwano nokubambisana. Konke lokhu kusendimeni yobuhlobo nomphakathi.
Empeleni ubuhlobo nomphakathi ufinyelela kubantu ngombono wohlobo oluthile ukuze uthole isivumelwano sabo kanye nokuxhaswa. Ukuphumelela kwakho ekusebenzeni nabanye, kuya ngokuthi ufinyelela kanjani emphakathini ngombono wakho.
Ubuhlobo nomphakathi liyithuluzi elidingeka ngokuphelele ukukusiza udlulisele imibono yakho. Futhi noma yimuphi umuntu osebenzela ukwenza umhlaba ube yindawo engcono angaba nempumelelo enkulu kakhulu ngokusebenzisa ubuhlobo nomphakathi.
Noma ngabe wenzani—kusukela ekuthatheni izinyathelo ukuthuthukisa indawo yangakini kuye ekusizeni abantu ukuba baphume ezidakamizweni—ngokusebenzisa amathuluzi obuhlobo nomphakathi ungafinyelela kwabanye ngomyalezo wakho. Uzobe usuthola isivumelwano sabo nokubambisana kukho. Ubudlelwano nomphakathi benza ukuthi ukwazi ukuthola ukwamukelwa nokusekelwa komsebenzi ofuna ukuwenza.
Ubuhlobo nomphakathi akuyona into entsha. Babukhona njengesihloko esisemthethweni ngezikhathi zamaRoma eminyakeni eyizinkulungwane ezimbalwa ezedlule, lapho babusetshenziselwa injongo yokukhuthaza imicimbi ehlukahlukene. Ngisho nangaleso sikhathi, imiyalezo yayilotshwa ukuze abantu bayibone odongeni lwe-Colosseum (isakhiwo esikhulu, esingenalo uphahla esinemigqa yezihlalo esasakhiwe eRoma esasisetshenziselwa ukuzijabulisa komphakathi)
Emakhulwini eminyaka i-PR yathuthukiswa kancane njengesifundo ngoba yamiswa ekuqhubekeleni phambili yilabo ababenezinhloso ezimbi. Babenentshisekelo yokuyisebenzisela izizathu zabo ezifihlekile zokwenza izinto eziyinzuzo kubona futhi ngokuvamile ezazilimaza abanye.
Kwakungekho olutheni kwaze kwaba i-Scientology, ngeyakuthola mayelana nokuxhumana kanye nobunjalo ngempela (izimfanelo eziyisisekelo umuntu anazo) boMuntu, ukuthi empeleni ubuhlobo nomphakathi baba yisifundo esiphelele esingasiza umphakathi nanoma yimuphi umuntu.
Ubuhlobo nomphakathi buyindlela yokwenza amaphrojekthi akho ukuthi abantu bawazi futhi bunemithetho yawo.
Ukuze uqale ufunde ukwenza ubuhlobo nomphakathi, kufanele uqale ngokuqonda ukuthi ubudlelwane nomphakathi buyini nokuthi buquketheni.